ပေါချောင်ကောင်းဈေး နဲ့ ရခဲ့တဲ့ တရုတ် ရဲ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်တင် သင်္ဘောကြီး အကြောင်း – Zartiman
တရုပ်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(ရေ) ( PLAN )ဟာ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စီးလောက်ပိုင်ဆိုင်လာဖို့ စိတ်ကူးရှိနေတာ ၁၉၇၀ ခုနှစ် လောက်ကတည်းကပါ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက တရုပ်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ရော ရုရှနဲ့ပါ အဆင်မပြေနေခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ စစ်အေးခေတ်ကာလ တုန်းမှာ သူတို့ရဲ့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောစိတ်ကူးအိပ်မက်ဟာ တရုပ်ရေတပ်ရဲ့ နည်းပညာစွမ်းပကားနဲ့ တတ်နိုင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏ အပေါ် ကြည့်ပြီးတိုင်းတာရင် အများကြီး ကွာဟနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗိယက်ယူနီယန်ဟာသူ့ရဲ့ ကိဗ်အမျိုးအစား ပထမဆုံးလေယာဉ် တင်သ င်္ဘော တွေကို ၁၉၇၀ခုနှစ်လောက်မှာ ဖြန့်ကျက်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကိဗ်အမျိုးအစားတွေဟာ YAK 30 ဖော်ဂျာ လေယာဉ်တွေ တင်ဆောင်နိုင်ပါတယ် ။ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီလေယာဉ်တွေဟာ စစ်ရေးစွမ်းပကားမှာ ကန့်သတ်ချက်အများကြီးရှိတဲ့လေယာဉ်တွေပါပဲ ၁၉၈၀လောက်ရောက်လာချိန်မှာတော့ ဆိုဗိယက်ဟာ ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ကုဇ်နက်ဆော့ ဗ် အမျိုးအစားလေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှစ်စီး ကိုဆောက်ခဲ့ပါတယ် ဒီသင်္ဘောတွေဟာ ski-jump လို့ခေါ်တဲ့ အပေါ်ကိုကွေးတက်သွားတဲ့ ပြေးလမ်းပါတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်ပြီး သမားရိုးကျ စနစ်တွေဖြစ်ပေမယ့် ပိုပြီးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားအောင်ပြုလုပ်ထားတာပါ SU 33 တိုက်လေ ယာဉ်တွေ ဆင်းသက်နိုင်လာပါတယ်။တရုပ်တို့ရဲ့ ပထမဆုံး လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ဘယ်လို ရလာခဲ့ သလည်း? ။
လျောင်နင်းဆိုတဲ့ တရုပ်တို့ရဲ့ပထမဆုံး လေယာဉ်တင် သင်္ဘောဟာ အမေရိကန်ရဲ့ ဆူပါလေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှ မတူ နိုင်ဘူး ဆိုတာပါ။အမေရိကန် Aircraft Carriers တွေဟာ တရုပ်တို့ထက်လေယာဉ် ပိုတင်ဆောင်နိုင်တယ် နျူကလီးယားပါဝါနဲ့ မောင်း နှင်နိုင်တယ် တရုပ်ရဲ့ ရေနွေးငွေ့တာဘိုင် အင်ဂျင်တွေဟာ ပျက်လွယ်ရပ်လွယ်ပြီး သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းအရ ski-jump ကုန်းပတ်ပြုလုပ်ထား ခြင်း ဟာ သင်္ဘောကို လောင်စာဆီနဲ့လေယာဉ်တွေတင်ဆောင်နိုင်မှုမှာ အတော်လေးကန့်သတ်ချက်ရှိသွား ပါတယ် ဘယ်လိုပဲပြောပြောပါ တ ရုပ်တို့အနေနဲ့ကတော့ လေယာဉ်တင် စစ်သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရလာစေတဲ့အပြင်။
အဆင့်တဆင့်ကိုခုန်ကူးနိုင်စေခဲ့တဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာကတော့အမှန်ပါပဲ ၂၀၁၂ မှာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးသောလေယာဉ်တင် သင်္ဘော ” လျောင်နင်း” ကို ရေချနိုင်တဲ့ အပေါ် တရုပ်တွေဟာ သိပ်ကိုဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြပါတယ် ဒီသင်္ဘောဟာ ဆိုဗီယက်တို့ရဲ့ ဆောက်လက်စ တို့လို့တန်းလန်း ကုဇ်နက်ဆော့ဗ်အမျိုးအစား လေယာဉ်တင်ခရူဆာသင်္ဘောကို ပြန်လည်မွမ်းမံပြုပြင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် တရုပ်တွေ ဒီ သင်္ဘော ဘယ်လိုရလာခဲ့ သလည်းဆိုတဲ့ တဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းတကယ်တော့ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ဘာလို့လည်းဆိုရင် ဘေဂျင်းအစိုးရ ရဲ့ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှ မူမှန်မဟုတ်တဲ့ ဝယ်ယူနည်းတွေနဲ့ တရုပ်ရေတပ်အတွက်ဝယ်ခဲ့တာမို့လို့ပါပဲ။
ဘယ်လိုဝယ်ခဲ့တာလည်းဆိုရင် တရုပ်ဘတ်စကက်ဘောသမား တစ်ယောက်ကနေ ပြီးတော့ရေပေါ်ကာစီနိုကစားဝိုင်းဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့ အ ကြောင်းပြချက်နဲ့ ရုရှကနေဝယ်လာခဲ့တာဖြစ်လို့ပါပဲ။ရှေးဦး လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေ ဖြစ်တဲ့ ကိဗ် အမျိုးအစားတွေလိုပါပဲ ကုဇနက် ဆော့ဗ်တွေဟာ လေယာဉ်တင်ကရူဆာ သင်္ဘောတွေသာဖြစ်နေပါတယ် သူတို့မှာ P700 Granit သင်္ဘောဖျက်မစ်ဆိုင်း စနစ် ၁၂ခုတပ်ဆင် ထားတာ ကြောင့်မို့ ကရူဆာလို့ပြောကြတာပါပဲ ဒီလိုလုပ်ရတဲ့နည်းက အရေးကြီးပါတယ် ။ဘာကြောင့် ဒီလိုလေယာဉ်တင် ကရူဆာတွေ လုပ်ရတာလည်းဆိုရင် ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်ပါ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေဟာ တန်ချိန်၁၅၀၀၀ ထက်ပို ရင်။
ဘော့စပရပ်ရေလက်ကြားကို သုံးပြီး ပင်လယ်နက်ကနေ မြေထဲပင်လယ်ကို ဖြတ်သန်းဖို့တရားဝင်ခွင့်မပြုပါဘူး (Montreux Conven tionအရ)ဆိုဗိယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲသွားပြီးနောက် မှာ ယူကရိန်းပြည်နယ် မှာဆောက်လက်စ “ဗာရီယတ် “အမည်ရတဲ့ ကုဇ်နက် ဆော့ဗ်အမျိုးအစား လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စီးကျန်နေပါတယ် သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ပဲပြီးသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင် ရာတွေနဲ့ လက်နက်စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ မပြီးသေးဘူး ပေါ့ ၁၉၉၂ခုနှစ်မှာ ယူကရိန်း အစိုးရဟာ ငွေကြပ်တည်းလာတဲ့အခါမှာ Mykolaiv သင်္ဘောကျင်းမှာရှိနေတဲ့ သံချေးတက်စပြုနေတဲ့ သံထည်သတ္တုထည်တွေကို တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ ရောင်းချဖို့ကြံစည်ရင်း ။
တည်ဆောက်လက်စတွေကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်ပါတယ် ရုရှ တရုပ် အိန္ဒိယတို့ကိုလည်း အကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ ဆယ်စုနှစ်နှစ် ခု ကြာပြီးမှ ၂၀၁၅ ရောက်တဲ့အခါမှာ တောင်တရုပ်မနက်ခင်း သတင်းစာ( South china morning post)က ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို အပိုင်း နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောဖြစ်လာဖို့အရေး ဘယ်လိုတွေလုပ်ခဲ့ ခြေပုန်းခုတ်ခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း ကို ဖွင့်ချထားတဲ့ ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်ရေတပ်ဟာ “ဗာရီယတ်” ကိုလိုချင်လာတဲ့အခါ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ယူကရိန်း ကိုလွှတ်ပါတယ် ဝယ်သင့်မသင့်စစ်ဆေးဖို့ပေါ့ ဒါပေမယ့် ဘေဂျင်းအစိုးရဟာ စိတ်ပူပန်နေခဲ့ပါတယ် ။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောရှိအောင်ကြိုးစားလာတာဟာ တင်းမာမှုတွေကိုဖြစ်လာစေနိုင်တယ် တရုပ်ပြည်ကြီးကို တံ ခါးဖွင့်ပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေရတဲ့အချိန် စီးပွားရေးကောင်းအောင်လုပ်နေရချိန်မှာ အနောက်နိုင်ငံတွေက ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမယ့်သူတွေ မလာတော့မှာကိုစိတ်ပူတာဖြစ်ပါတယ်။၁၉၉၆ မှာ တရုပ်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ကျိရှန်ဒယ် (General Ji )နဲ့ တရုပ်တပ်မတော်အရာရှိတွေဟာ တရုပ်တပ်မတော် ဘတ်စကက်ဘောလက်ရွေးစင်ဟောင်း Xu Zhengping (ဆူ) ကို စတင်ချဉ်းကပ် စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒိအချိန်မှာ “ဆူ” ဟာ အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမကဘဲ။
စီးပွားရေးမှာ နိုင်ငံတကာအထိခြေဆန့်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဆူအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်နဲ့ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကို ဝယ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် အပြင်ဘန်းအကြောင်းပြရမှာက ရေပေါ် ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ လုပ်ဖို့ဆိုတာပါပဲ ဒါမှသာ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် စစ် ဆေးစုံစမ်းမှုတွေ ကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ် ပြီးတော့မှ နိုင်ငံရေးအခြေအနေပေးလာတဲ့အချိန်မှာ PLA ကလွှဲပြောင်းယူလိုက်မယ် ဆိုတဲ့အကြံ ပါပဲ။ဒီလိုဇာတ်လမ်းဆင်တာဟာ ကြားရရုံနဲ့တော့ဟာသမမြောက်ပါဘူး ဘာလို့လည်းဆိုရင် ကိဗ်အမျိုးအစားလေယာဉ်တင် သင်္ဘောကြီး တွေအကြောင်း ပြန်ပြောကြည့်ရပါမယ်။ သူတို့ထဲက၂စီးဟာ တရုပ်ပြည်ထဲမှာ ရောက်နေပါတယ်။
ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုစီမှာချည်နှောင်ဆိုက်ကပ်ထားပါတယ် ကလေးကစားကွင်းနဲ့ အပန်းဖြေ ဥယျာဉ်တွေအဖြစ်နဲ့ပါပဲ “The Minsk ” ဆိုတဲ့ AC ကတော့ ရှန်ဟိုင်းမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်က နန်တုန် မှာရောက်နေပါတယ် ရှန်ဇမ်းမြို့ခံဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းရှင်တွေစုပေါင်းပြီး ဒေါ်လာ၎.၄ သန်းနဲ့ ဝယ်ထားတာပါ ပထမဆုံးကိဗ် AC ကတော့ တီအန်ဂျင်းမှာ ရေပေါ်ဟိုတယ် ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါပေမယ့် တရုပ်စစ်တပ်ဟာ ပိုပြီးခေတ်မှီ တဲ့ ကုဇ်နက်ဆော့ဗ် ကိုသာ PLA Navy အတွက် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေတာပါပဲ “ဆူ” တစ်ယောက်ဟာ အကြံအစည်ထဲမှာနစ်မျောသွားပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း၃၀ နဲ့ညီမျှတဲ့ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာတွေကို မိတ်ဆွေတွေနဲ့စုပေါင်းမတည်လိုက်ပြီး စွန့်စားခန်းစပါတော့တယ်။
ပထမဆုံးလုပ်တာကတော့ မကာအိုမှာ ဒေါ်လာ၆သန်းနဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဝယ်ယူပြီး ယုတ္တိရှိအောင်စလုပ်တာပါပဲ “Agência TurísticaeDiversões Chong Lot Limitada “လို့ခေါ်တဲ့ ကုမ္ပဏီပါ အဲ့ဒီအချိန်က မကာအိုဟာ ပေါ်တူဂီလက်အောက်ခံကိုလိုနီဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးနှစ် တွေ မှာရောက်ရှိနေတဲ့ကာလ ပါပဲ/၁၉၉၈ ဇန်နဝါရီလမှာ” ဆူ” ဟာယူကရိန်းကိုရောက်လာပြီး သင်္ဘောကျင်းတာဝန်ခံတွေနဲ့ တွေ့ခဲ့ ပါ တယ် မက်လောက်စရာကောင်းတဲ့ လာဘ်တွေထိုးဖို့ကမ်းလှမ်းပြီး ၁၂၄ ဘိုင်ဂျူး ( 124 proof baijui )လို့ခေါ်တဲ့ တန်ဘိုးကြီးမားလွန်းတဲ့ တရုပ်အရက်ပုလင်း အလုံးပေါင်း၅၀လောက်ကုန်ပြီးတဲ့အခါ ။
လေးရက်မြောက်နေ့မှာတော့ ဒေါ်လာသန်း ၂၀ နဲ့ ဆောက်လက်စ ကုဇ်နက်ဆော့ဗ် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကိုဝယ်ဖို့ သဘောတူညီချက်ရ ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီ သန်း၂၀ဆိုတာယနေ့ခေတ် တိုက်လေယာဉ်တစ်စီးစာပဲရှိပါတယ် ဆူဟာ တစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိ ပေးချေရမယ့်ငွေ ကိုမ ပေးချေနိုင်ခဲ့တော့ နောက်ကြကြေး ဒေါ်လာဆယ်သန်းအပိုထပ်ပေးခဲ့ရပါတယ် အဲ့ဒိမှာ နိုင်ငံတကာကလေ့လာ သူတွေဟာ အရောင်းအ ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မသင်္ကာစရာအနံ့ရသွားပါတော့တယ် ဘာလည်းဆိုရင် “ဆူ” ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာ မကာအိုမှာ လောင်းကစားရုံ လိုင်စင်ရမ ထားတဲ့အပြင်ကုမ္ပဏီဟာ လိပ်စာရော ဖုန်းနံပါတ်ပါ အပြင်မှာတကယ်မရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကံကောင်းပြီး ဖြစ်ချင်ပြန်တော့ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ စာရင်းဇယားတွေကိုနှစ်အလိုက်ဖော်ပြထုတ်ဝေတဲ့ Janes Journal ဂျိန်းစ်ဂျာနယ်ဝန်ထမ်း လေ့လာသူတစ်ယောက်က ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာနဲ့အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာဒီအရောင်းအဝယ်မှာ တ ရုပ်စစ်တပ်ကပါတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒီလိုအိုမင်းဟောင်းနွမ်းနေတဲ့ “ဗာရီယတ်” လိုမျိုးကို ဝယ်ပြီးသုံးစွဲဖို့ဆိုတာအဆက် အစပ်မရှိနိုင် ဘူးလို့ ပြောခဲ့တော့ သတင်းမုဆိုးတွေ စိတ်ဝင်စားမှုလျော့ကျသွားခဲ့တာပါ။သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ အစစအရာရာအားလုံးဟာ အဆင် သင့်ဖြစ်နေပါပြီ မတပ်ဆင်ရသေးတဲ့သင်္ဘောအင်ဂျင်လေးလုံးဟာ သေသေချာချာ ထုပ်ပိုးပြီး ။
သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဘလူးပရင့်ပုံတွေ drawings တွေနဲ့အတူ တရုပ်ပြည်ကို ကုန်းလမ်းကနေ ပို့ခဲ့ပြီးပါပြီ ဟော်လန်နိုင် ငံက တွဲဆွဲရေယာဉ်ကုမ္ပဏီကလည်း ၃၀၆မီတာအရှည် ရှိတဲ့ “ဗာရီယတ်” ကို တရုပ်ပြည်အထိ ဆွဲသွားဖို့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီ ဘာတွေဖြစ်ကြ ဦးမလည်း ကြည့်ကြပါစို့။အိမ်နဲ့အဝေးကြီးမှာကားပျက်လို့ပြန်ဆွဲရတဲ့အဖြစ်ကို ကြုံဖူးကြပါသလား အခုအဖြစ်က အဲ့ဒါထက် အဆပေါင်းငါး ရာ ပိုခက်ပါတယ် ဘာလို့လည်း လျောင်နင်း ဟာ တူရကီနိုင်ငံ အီစတန်ဘူလ် ကမ်းခြေကပင်လယ်ပြင်မှာ ရက်ပေါင်းငါးရာဝန်းကျင် လောက် တွဲဆွဲသင်္ဘောနဲ့အတူ တားမြစ်ခံထားရလို့ပါပဲ တူရကီအစိုးရက ဘော့စပရပ်ရေလက်ကြားကို ဖြတ်သန်းခွင့်မပေးလို့ပါပဲ ။
အဲ့ဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်မှ မြေထဲပင်လယ်ကိုရောက်မှာပါ တူရကီပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးက တားမြစ်တာပါပဲ။သူပြောတာက ဒီလို ၃၀၆ မီတာအရှည်ရှိတဲ့ ကိုယ့်ဘာသာမမောင်းနိုင်ပဲ ဆွဲလာရတဲ့ သင်္ဘောတစ်စီးဟာ ဆွဲလာရင်း ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့ တခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ရေလက်ကြားဟာပိတ်သွားနိုင်တယ် ရေလက်ကြားဟာ အကျဉ်းဆုံးနေရာမှာ မီတာရဝဝ ပဲအကျယ်ရှိတာမို့ ရေလမ်းပိတ်သွားရင် ဒီရေ လက်ကြားကိုအသုံးပြုနေကြရတဲ့ရေယာဉ်အသွားအလာတွေ ပိတ်ကုန်မယ် အီစတန်ဘူလ်မြို့မှာ အခက်အခဲတွေရှိလာလိမ့်မယ်ဆိုပြီး တားမြစ်ခဲ့တာပါ။အရင်အချိန်တွေတုန်းကလည်းသာဓကအဖြစ်အပျက်တွေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်ပေါ့ ။
အဲ့ဒိ မတိုင်ခင်တနှစ်က က ယူဂိုစလားဗီးယားမှာ နေတိုးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကို တရုပ်ကကန့်ကွက်ခဲ့ဖူးပါတယ် တူရကီ က နေတိုးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါခဲ့တယ် ဒါကို ပြန်လက်စားချေတယ်လို့ တရုပ်ကထင်လာ တယ် လျောင်နင်းဟာ တူရကီမှာ ၁၆ လတိတိ တွဲဆွဲခ တစ်နေ့ကို ဒေါ်လာ၈၅၀၀ ပေးနေရရင်းနဲ့ ပိတ်မိနေခဲ့ပါတယ်အဆုံးမှာတော့ ဘေဂျင်းအစိုးရဟာ တူရကီကို တိုးရစ်ခရီးသွားလာရေး အထူး အခွင့်အရေးတွေပေးပြီး ဖြတ်သန်းခွင့်ကိုလဲလှယ်ခဲ့ရပါတယ် ၂၀၀၁ သြဂုတ်လကိုရောက်လာပါပြီ နောက်ဆုံးတကာ့နောက်ဆုံးမှာတော့ ၂၀၀၁ နိုဝင်ဘာလအရောက်မှာ တွဲရေယာဉ်ပေါင်း တစ်ဒါဇင်ကျော် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေး ရေယာဉ်များစွာတို့နဲ့အတူ။
လျောင်နင်းဟာ ဘော့စပရပ်ရေ လက်ကြားကို ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမပေါ်ပေါက်ဘဲ ဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ် ဒါဒနယ်ရေလက်ကြားကိုပါဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ အခက်အခဲဆုံးအပိုင်းကိုကျော်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။နောက်ထပ်၂ရက်အကြာမှာ Skyro ကျွန်းအနားအရောက် ပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းမိတော့ လေတိုင်နှုန်း ၆၀မိုင်လောက်မိပြီး တက်မတွေမတပ်ထားရသေးတဲ့လျောင်နင်းဟာ မုန်တိုင်းထဲမှာ တွဲဆွဲကြိုးပြတ်ပြီး မျောပါသွားခဲ့ပါသေးတယ် ပြန်လိုက်ဆွဲရတာနှစ်ရက်လောက်ကြာခဲ့ပြီး တွဲဆွဲရေယာဉ်နဲ့ ကြိုးပြန်ဆက်ဖို့ကြိုးစားရင်း ပေါ်တူဂီသင်္ဘောသားတစ်ယောက် ရေထဲကျသေဆုံးခဲ့ရတာလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်
ကိုယ့်ဘာသာမောင်းနိုင်တဲ့ သင်္ဘောတွေဟာ ဆူးအက်တူးမြောင်းကို ဖြတ်ပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကနေ တရုပ်ပြည်ကို ဖြတ်ဝင်နိုင်ပါတယ် လမ်းတိုပါတယ် ဒါပေမယ့်တူးမြောင်းဟာ စက်မဲ့ရေယာဉ်တွေကို ပေးမဖြတ်ပါဘူး ဒီတော့ လျောင်နင်းအလောင်းအလျာဟာ အာဖရိကကို တပါတ်ကြီးပါတ်ရပါတော့တယ် ဗတ်စကိုဒဂါးမားရဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်းပေါ့ တချုပ်ချုပ်တချပ်ချပ်နဲ့ ကြွကြွရွရွတဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ ပေါ့ တစ်နာရီကို ၇မိုင်နှုန်းလောက်နဲ့ပါ ပဲ။၂၀၀၂ မတ်လမှာတော့ လျောင်နင်းဟာ လျောင်နင်းပြည်နယ် ဒါ့လိယန် မြို့က ဆိပ်ကမ်း ကို ဆိုက် ရောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ် ပြည်နယ်ရဲ့နာမည်ကိုအစွဲပြုပြီး သူ့ကို ဒီနာမည်ပေးခဲ့တာပါပဲ ။
သုံးနှစ်အကြာမှာ အကြီးစားပြင်ဆင်တပ်ဆင်ရေး အတွက်လွန်းတင်ခဲ့ပါတယ် သံချေးတွေကိုသဲနဲ့မှုတ်ပြီးချွတ်ချတာတွေ အင်ဂျင်တွေပြန် တပ်ပြီး အထိုင်ချတာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တရုပ်ရေတပ်ဟာ သင်္ဘောကို လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအဖြစ်နဲ့ပဲ သုံးချင်တာပါ ရုရှတွေဆောက် ထားသလို ခရူဆာကယ်ရီယာအဖြစ်နဲ့ ဖါးတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်း မလိုချင်ပါဘူး ဒီတော့ သင်္ဘောဖျက်မစ်ဆိုင်းတွေနေရာမှာ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်စနစ်ရယ် အနီးကပ် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေရယ်နဲ့ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ သင်္ဘောရဲ့အခြေခံ တိုက်ခိုက်ရေး လက်နက်စနစ် ကိုပြောရရင် J15 တိုက်လေယာဉ်၂၄စီးဟာ ရုရှတို့ရဲ့ SU33 ကိုကော်ပီလုပ်ထားတာပါပဲ။
ယူကရိန်းဆီကနေ ရလာခဲ့တာပါ လျောင်နင်းဟာ ရဟတ်ယာဉ်တွေကိုလည်းတင်ဆောင်နိုင်ပါတယ် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ရဟတ် ယာဉ် တွေနဲ့ ကယ်ဆယ်ရေး ရဟတ်ယာဉ် စုစုပေါင်းလေးစင်း တင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလ ၂၅ရက်နေ့မှာ လျောင်နင်းကို တပ်တော်ဝင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ် J15 တိုက်လေယာဉ်တွေ ဆင်းသက်တာ တွေကတော့ နောက် တစ်လအကြာမှာ စတင်ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ တယ် လျောင်နင်းကို ပုံတူကူးချထားတဲ့ တရုပ်ပြည်တွင်းဖြစ် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနောက်တစ်စီးကတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ပင်လယ်ပြင်ကို ထွက်လာဖို့ရှိနေပါပြီ ကားတွေနဲ့ သယ်လာခဲ့ကြတဲ့ ဘလူးပရင့်တွေနဲ့ drawings ပုံစံတွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပေါ့။
Xu ရဲ့အပြောအရ ပေါ့ ဗာရီယတ် က တရုပ်တို့ကို သုတေသနနဲ့ တီထွင်မှုမှာ ၁၅ နှစ်လောက် အချိန်ကုန်သက်သာအောင် လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ် “ဆူ” ကို တရုပ်ပြည်ကြီးက အရမ်းချီးမြှင့်မယ်လို့မထင်ကြဘူးလား ? “ဆူ” ဟာဟောင်ကောင်က အိမ်လည်းရောင်း ခဲ့ရတယ် စုစုပေါင်း သန်း၁၂၀ လောက်ကုန်ကျခဲ့ပြီး အဆင်မပြေမှုတွေကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် နေရတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ အကြွေးတွေကို လှိမ့်ဆပ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ လုပ်ငန်းအကြံအစည်ကြီးကို စခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂျီဟာ အဂတိလိုက်စားမှု မှောင်ခိုမှုတွေ နဲ့ ၂၀၀၁ မှာ ထောင်ချခံခဲ့ရတာကြောင့် အကြံအစည်ကြီးမှာပါခဲ့ကြတဲ့ အရာရှိ တွေက”ဆူ” ကို လာမတွေ့ကြတော့သလို။
သူတကယ်အကုန်အကျခံထားရပါတယ်ဆိုတာကို ထောက်ခံပေးဖို့လည်းမလုပ်ကြတော့ပါဘူး ။အစိုးရအနေနဲ့တော့ “ဆူ”ကိုဒေါ်လာသန်း ၂၀ ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ် သင်္ဘောဝယ်ယူခအဖြစ်ပေါ့ ဒီလောက်နဲ့မလောက်ပါဘူး ဒိထက်အများကြီးကုန်ကျထားရပါတယ်ဆိုပေမယ့် ပိုက်ဆ န်ပြန်မရပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ “Xu” အနေနဲ့ ဘောက်ချာ(ပြေစာ) တွေ လက်ထဲမှာ မရှိတော့လို့ပါပဲတဲ့ တကယ်တမ်းပြောရရင် ယူကရိန်းမှာပေးခဲ့ရတဲ့ လာဘ်ငွေတွေဟာ ပြေစာမရှိနိုင်ပါဘူး တချို့သော ကိစ္စတွေမှာလည်း ပြေစာဆိုတာတွေဟာမရနိုင်ပါဘူး သင်ခန်း စာအနေနဲ့တော့ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ဘောက်ချာပြမှ ပိုက်ဆန်ရပါမယ် လို့သာမှတ်ပါ ။
ဗာရီယတ် သင်္ဘောကြီးဝယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်သားသင့်တာတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြရမယ်ဆိုရင် ” သင်ပေးလိုက်တဲ့ စေတနာတွေအ တွက် သိတ်ပြီးပြန်မမျှော်လင့်ပါနဲ့ ပြီးတော့ ဘောက်ချာတွေကိုသိမ်းထားပါ” လို့ပါပဲ။
ပေါခြောငျကောငျးဈေး နဲ့ ရခဲ့တဲ့ တရုတျ ရဲ့ ပထမဆုံး လယောဉျတငျ သင်ျဘောကွီး အကွောငျး
တရုပျပွညျလှတျမွောကျရေးတပျမတျော(ရေ) ( PLAN )ဟာ လယောဉျတငျသင်ျဘောတဈစီးလောကျပိုငျဆိုငျလာဖို့ စိတျကူးရှိနတော ၁၉၇၀ ခုနှဈ လောကျကတညျးကပါ အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက တရုပျဟာ အမရေိကနျနဲ့ရော ရုရှနဲ့ပါ အဆငျမပွနေခေဲ့တဲ့အခြိနျပေါ့ စဈအေးခတျေကာလ တုနျးမှာ သူတို့ရဲ့ လယောဉျတငျသင်ျဘောစိတျကူးအိပျမကျဟာ တရုပျရတေပျရဲ့ နညျးပညာစှမျးပကားနဲ့ တတျနိုငျတဲ့ငှကွေေးပမာဏ အပျေါ ကွညျ့ပွီးတိုငျးတာရငျ အမြားကွီး ကှာဟနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။ဆိုဗိယကျယူနီယနျဟာသူ့ရဲ့ ကိဗျအမြိုးအစား ပထမဆုံးလယောဉျ တငျသ င်ျဘော တှကေို ၁၉၇၀ခုနှဈလောကျမှာ ဖွနျ့ကကျြအသုံးပွုနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ကိဗျအမြိုးအစားတှဟော YAK 30 ဖျောဂြာ လယောဉျတှေ တငျဆောငျနိုငျပါတယျ ။ဒါပမေယျ့အဲ့ဒီလယောဉျတှဟော စဈရေးစှမျးပကားမှာ ကနျ့သတျခကျြအမြားကွီးရှိတဲ့လယောဉျတှပေါပဲ ၁၉၈၀လောကျရောကျလာခြိနျမှာတော့ ဆိုဗိယကျဟာ ပိုပွီးကောငျးမှနျတဲ့ ကုဇျနကျဆော့ ဗျ အမြိုးအစားလယောဉျတငျသင်ျဘောနှဈစီး ကိုဆောကျခဲ့ပါတယျ ဒီသင်ျဘောတှဟော ski-jump လို့ချေါတဲ့ အပျေါကိုကှေးတကျသှားတဲ့ ပွေးလမျးပါတဲ့ဒီဇိုငျးမြိုးဖွဈပွီး သမားရိုးကြ စနဈတှဖွေဈပမေယျ့ ပိုပွီးစှမျးဆောငျရညျမွငျ့မားအောငျပွုလုပျထားတာပါ SU 33 တိုကျလေ ယာဉျတှေ ဆငျးသကျနိုငျလာပါတယျ။တရုပျတို့ရဲ့ ပထမဆုံး လယောဉျတငျသင်ျဘော ဘယျလို ရလာခဲ့ သလညျး? ။
လြောငျနငျးဆိုတဲ့ တရုပျတို့ရဲ့ပထမဆုံး လယောဉျတငျ သင်ျဘောဟာ အမရေိကနျရဲ့ ဆူပါလယောဉျတငျသင်ျဘောတှနေဲ့တော့ ဘယျလိုမှ မတူ နိုငျဘူး ဆိုတာပါ။အမရေိကနျ Aircraft Carriers တှဟော တရုပျတို့ထကျလယောဉျ ပိုတငျဆောငျနိုငျတယျ နြူကလီးယားပါဝါနဲ့ မောငျး နှငျနိုငျတယျ တရုပျရဲ့ ရနှေေးငှတေ့ာဘိုငျ အငျဂငျြတှဟော ပကျြလှယျရပျလှယျပွီး သူ့ရဲ့ဒီဇိုငျးအရ ski-jump ကုနျးပတျပွုလုပျထား ခွငျး ဟာ သင်ျဘောကို လောငျစာဆီနဲ့လယောဉျတှတေငျဆောငျနိုငျမှုမှာ အတျောလေးကနျ့သတျခကျြရှိသှား ပါတယျ ဘယျလိုပဲပွောပွောပါ တ ရုပျတို့အနနေဲ့ကတော့ လယောဉျတငျ စဈသင်ျဘောတညျဆောကျရေး အတှကျ အခှငျ့အလမျးတဈခု ရလာစတေဲ့အပွငျ။
အဆငျ့တဆငျ့ကိုခုနျကူးနိုငျစခေဲ့တဲ့ စီမံကိနျးတဈခုဖွဈခဲ့တာကတော့အမှနျပါပဲ ၂၀၁၂ မှာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးသောလယောဉျတငျ သင်ျဘော ” လြောငျနငျး” ကို ရခေနြိုငျတဲ့ အပျေါ တရုပျတှဟော သိပျကိုဂုဏျယူဝမျးမွောကျခဲ့ကွပါတယျ ဒီသင်ျဘောဟာ ဆိုဗီယကျတို့ရဲ့ ဆောကျလကျစ တို့လို့တနျးလနျး ကုဇျနကျဆော့ဗျအမြိုးအစား လယောဉျတငျခရူဆာသင်ျဘောကို ပွနျလညျမှမျးမံပွုပွငျထားတာဖွဈပါတယျ တရုပျတှေ ဒီ သင်ျဘော ဘယျလိုရလာခဲ့ သလညျးဆိုတဲ့ တဲ့ဖွဈစဉျကလညျးတကယျတော့ရယျစရာကောငျးပါတယျ။ဘာလို့လညျးဆိုရငျ ဘဂေငျြးအစိုးရ ရဲ့ဆန်ဒကို ဆနျ့ကငျြပွီးတော့မှ မူမှနျမဟုတျတဲ့ ဝယျယူနညျးတှနေဲ့ တရုပျရတေပျအတှကျဝယျခဲ့တာမို့လို့ပါပဲ။
ဘယျလိုဝယျခဲ့တာလညျးဆိုရငျ တရုပျဘတျစကကျဘောသမား တဈယောကျကနေ ပွီးတော့ရပေျေါကာစီနိုကစားဝိုငျးဖှငျ့မယျဆိုတဲ့ အ ကွောငျးပွခကျြနဲ့ ရုရှကနဝေယျလာခဲ့တာဖွဈလို့ပါပဲ။ရှေးဦး လယောဉျတငျသင်ျဘောတှေ ဖွဈတဲ့ ကိဗျ အမြိုးအစားတှလေိုပါပဲ ကုဇနကျ ဆော့ဗျတှဟော လယောဉျတငျကရူဆာ သင်ျဘောတှသောဖွဈနပေါတယျ သူတို့မှာ P700 Granit သင်ျဘောဖကျြမဈဆိုငျး စနဈ ၁၂ခုတပျဆငျ ထားတာ ကွောငျ့မို့ ကရူဆာလို့ပွောကွတာပါပဲ ဒီလိုလုပျရတဲ့နညျးက အရေးကွီးပါတယျ ။ဘာကွောငျ့ ဒီလိုလယောဉျတငျ ကရူဆာတှေ လုပျရတာလညျးဆိုရငျ ကနျ့သတျခကျြကွောငျ့ပါ လယောဉျတငျသင်ျဘောတှဟော တနျခြိနျ၁၅၀၀၀ ထကျပို ရငျ။
ဘော့စပရပျရလေကျကွားကို သုံးပွီး ပငျလယျနကျကနေ မွထေဲပငျလယျကို ဖွတျသနျးဖို့တရားဝငျခှငျ့မပွုပါဘူး (Montreux Conven tionအရ)ဆိုဗိယကျပွညျထောငျစုကွီးပွိုကှဲသှားပွီးနောကျ မှာ ယူကရိနျးပွညျနယျ မှာဆောကျလကျစ “ဗာရီယတျ “အမညျရတဲ့ ကုဇျနကျ ဆော့ဗျအမြိုးအစား လယောဉျတငျသင်ျဘောတဈစီးကနျြနပေါတယျ သုံးပုံနှဈပုံလောကျပဲပွီးသေးတဲ့အခြိနျဖွဈပါတယျ လြှပျစဈပိုငျးဆိုငျ ရာတှနေဲ့ လကျနကျစနဈပိုငျးဆိုငျရာတှေ မပွီးသေးဘူး ပေါ့ ၁၉၉၂ခုနှဈမှာ ယူကရိနျး အစိုးရဟာ ငှကွေပျတညျးလာတဲ့အခါမှာ Mykolaiv သင်ျဘောကငျြးမှာရှိနတေဲ့ သံခြေးတကျစပွုနတေဲ့ သံထညျသတ်တုထညျတှကေို တဈဖကျလှညျ့နဲ့ ရောငျးခဖြို့ကွံစညျရငျး ။
တညျဆောကျလကျစတှကေိုလညျး ရပျဆိုငျးပဈလိုကျပါတယျ ရုရှ တရုပျ အိန်ဒိယတို့ကိုလညျး အကွောငျးကွားလိုကျပါတယျ။ ဆယျစုနှဈနှဈ ခု ကွာပွီးမှ ၂၀၁၅ ရောကျတဲ့အခါမှာ တောငျတရုပျမနကျခငျး သတငျးစာ( South china morning post)က ဆောငျးပါးတဈပုဒျကို အပိုငျး နှဈပိုငျးခှဲပွီးတော့ဖျောပွပေးခဲ့ပါတယျ လယောဉျတငျသင်ျဘောဖွဈလာဖို့အရေး ဘယျလိုတှလေုပျခဲ့ ခွပေုနျးခုတျခဲ့ရပါတယျဆိုတဲ့ အကွောငျး ကို ဖှငျ့ခထြားတဲ့ ဆောငျးပါးဖွဈပါတယျ။ တရုပျရတေပျဟာ “ဗာရီယတျ” ကိုလိုခငျြလာတဲ့အခါ အဖှဲ့တဈဖှဲ့ကို ယူကရိနျး ကိုလှတျပါတယျ ဝယျသငျ့မသငျ့စဈဆေးဖို့ပေါ့ ဒါပမေယျ့ ဘဂေငျြးအစိုးရဟာ စိတျပူပနျနခေဲ့ပါတယျ ။
ဘာကွောငျ့လညျးဆိုရငျ လယောဉျတငျသင်ျဘောရှိအောငျကွိုးစားလာတာဟာ တငျးမာမှုတှကေိုဖွဈလာစနေိုငျတယျ တရုပျပွညျကွီးကို တံ ခါးဖှငျ့ပွီး နိုငျငံခွားရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှကေိုဖိတျချေါနရေတဲ့အခြိနျ စီးပှားရေးကောငျးအောငျလုပျနရေခြိနျမှာ အနောကျနိုငျငံတှကေ ရငျးနှီး မွှုပျနှံမယျ့သူတှေ မလာတော့မှာကိုစိတျပူတာဖွဈပါတယျ။၁၉၉၆ မှာ တရုပျထောကျလှမျးရေးအကွီးအကဲ ကြိရှနျဒယျ (General Ji )နဲ့ တရုပျတပျမတျောအရာရှိတှဟော တရုပျတပျမတျော ဘတျစကကျဘောလကျရှေးစငျဟောငျး Xu Zhengping (ဆူ) ကို စတငျခဉျြးကပျ စညျးရုံးခဲ့ပါတယျ။အဲ့ဒိအခြိနျမှာ “ဆူ” ဟာ အောငျမွငျတဲ့စီးပှားရေးသမားတဈယောကျဖွဈရုံသာမကဘဲ။
စီးပှားရေးမှာ နိုငျငံတကာအထိခွဆေနျ့နိုငျသူတဈယောကျဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ဆူအနနေဲ့ ကိုယျပိုငျအစီအစဉျနဲ့ လယောဉျတငျသင်ျဘောကို ဝယျရမှာ ဖွဈပါတယျ အပွငျဘနျးအကွောငျးပွရမှာက ရပေျေါ ကာစီနိုလောငျးကစားရုံ လုပျဖို့ဆိုတာပါပဲ ဒါမှသာ စဈစဈပေါကျပေါကျ စဈ ဆေးစုံစမျးမှုတှေ ကိုရှောငျရှားနိုငျမယျ ပွီးတော့မှ နိုငျငံရေးအခွအေနပေေးလာတဲ့အခြိနျမှာ PLA ကလှဲပွောငျးယူလိုကျမယျ ဆိုတဲ့အကွံ ပါပဲ။ဒီလိုဇာတျလမျးဆငျတာဟာ ကွားရရုံနဲ့တော့ဟာသမမွောကျပါဘူး ဘာလို့လညျးဆိုရငျ ကိဗျအမြိုးအစားလယောဉျတငျ သင်ျဘောကွီး တှအေကွောငျး ပွနျပွောကွညျ့ရပါမယျ။ သူတို့ထဲက၂စီးဟာ တရုပျပွညျထဲမှာ ရောကျနပေါတယျ။
ဆိပျကမျးတဈခုစီမှာခညျြနှောငျဆိုကျကပျထားပါတယျ ကလေးကစားကှငျးနဲ့ အပနျးဖွေ ဥယြာဉျတှအေဖွဈနဲ့ပါပဲ “The Minsk ” ဆိုတဲ့ AC ကတော့ ရှနျဟိုငျးမွို့ရဲ့မွောကျဖကျက နနျတုနျ မှာရောကျနပေါတယျ ရှနျဇမျးမွို့ခံဗီဒီယိုဂိမျးလုပျငနျးရှငျတှစေုပေါငျးပွီး ဒျေါလာ၎.၄ သနျးနဲ့ ဝယျထားတာပါ ပထမဆုံးကိဗျ AC ကတော့ တီအနျဂငျြးမှာ ရပေျေါဟိုတယျ ဖွဈနပေါပွီ။ဒါပမေယျ့ တရုပျစဈတပျဟာ ပိုပွီးခတျေမှီ တဲ့ ကုဇျနကျဆော့ဗျ ကိုသာ PLA Navy အတှကျ စိတျဝငျစားမှု ရှိနတောပါပဲ “ဆူ” တဈယောကျဟာ အကွံအစညျထဲမှာနဈမြောသှားပွီး အမရေိကနျဒျေါလာသနျး၃၀ နဲ့ညီမြှတဲ့ဟောငျကောငျဒျေါလာတှကေို မိတျဆှတှေနေဲ့စုပေါငျးမတညျလိုကျပွီး စှနျ့စားခနျးစပါတော့တယျ။
ပထမဆုံးလုပျတာကတော့ မကာအိုမှာ ဒျေါလာ၆သနျးနဲ့ ကုမ်ပဏီတဈခုဝယျယူပွီး ယုတ်တိရှိအောငျစလုပျတာပါပဲ “Agência TurísticaeDiversões Chong Lot Limitada “လို့ချေါတဲ့ ကုမ်ပဏီပါ အဲ့ဒီအခြိနျက မကာအိုဟာ ပျေါတူဂီလကျအောကျခံကိုလိုနီဘဝရဲ့ နောကျဆုံးနှဈ တှေ မှာရောကျရှိနတေဲ့ကာလ ပါပဲ/၁၉၉၈ ဇနျနဝါရီလမှာ” ဆူ” ဟာယူကရိနျးကိုရောကျလာပွီး သင်ျဘောကငျြးတာဝနျခံတှနေဲ့ တှခေဲ့ ပါ တယျ မကျလောကျစရာကောငျးတဲ့ လာဘျတှထေိုးဖို့ကမျးလှမျးပွီး ၁၂၄ ဘိုငျဂြူး ( 124 proof baijui )လို့ချေါတဲ့ တနျဘိုးကွီးမားလှနျးတဲ့ တရုပျအရကျပုလငျး အလုံးပေါငျး၅၀လောကျကုနျပွီးတဲ့အခါ ။
လေးရကျမွောကျနမှေ့ာတော့ ဒျေါလာသနျး ၂၀ နဲ့ ဆောကျလကျစ ကုဇျနကျဆော့ဗျ လယောဉျတငျသင်ျဘောကိုဝယျဖို့ သဘောတူညီခကျြရ ခဲ့ပါတော့တယျ။အဲဒီ သနျး၂၀ဆိုတာယနခေ့တျေ တိုကျလယောဉျတဈစီးစာပဲရှိပါတယျ ဆူဟာ တဈနှဈကွာတဲ့အထိ ပေးခရြေမယျ့ငှေ ကိုမ ပေးခနြေိုငျခဲ့တော့ နောကျကွကွေး ဒျေါလာဆယျသနျးအပိုထပျပေးခဲ့ရပါတယျ အဲ့ဒိမှာ နိုငျငံတကာကလလေ့ာ သူတှဟော အရောငျးအ ဝယျနဲ့ပတျသကျပွီး မသင်ျကာစရာအနံ့ရသှားပါတော့တယျ ဘာလညျးဆိုရငျ “ဆူ” ရဲ့ကုမ်ပဏီဟာ မကာအိုမှာ လောငျးကစားရုံ လိုငျစငျရမ ထားတဲ့အပွငျကုမ်ပဏီဟာ လိပျစာရော ဖုနျးနံပါတျပါ အပွငျမှာတကယျမရှိတဲ့ကုမ်ပဏီဖွဈနပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ကံကောငျးပွီး ဖွဈခငျြပွနျတော့ စဈလကျနကျပစ်စညျးမြားဆိုငျရာ စာရငျးဇယားတှကေိုနှဈအလိုကျဖျောပွထုတျဝတေဲ့ Janes Journal ဂြိနျးဈဂြာနယျဝနျထမျး လလေ့ာသူတဈယောကျက ဝါရှငျတနျပို့ဈ သတငျးစာနဲ့အငျတာဗြူး တဈခုမှာဒီအရောငျးအဝယျမှာ တ ရုပျစဈတပျကပါတယျဆိုတာမဖွဈနိုငျဘူး ဒီလိုအိုမငျးဟောငျးနှမျးနတေဲ့ “ဗာရီယတျ” လိုမြိုးကို ဝယျပွီးသုံးစှဲဖို့ဆိုတာအဆကျ အစပျမရှိနိုငျ ဘူးလို့ ပွောခဲ့တော့ သတငျးမုဆိုးတှေ စိတျဝငျစားမှုလြော့ကသြှားခဲ့တာပါ။သက်ကရာဇျ ၂၀၀၀ ပွညျ့နှဈမှာ အစစအရာရာအားလုံးဟာ အဆငျ သငျ့ဖွဈနပေါပွီ မတပျဆငျရသေးတဲ့သင်ျဘောအငျဂငျြလေးလုံးဟာ သသေခြောခြာ ထုပျပိုးပွီး ။
သင်ျဘောတညျဆောကျရေးနဲ့ဆိုငျတဲ့ ဘလူးပရငျ့ပုံတှေ drawings တှနေဲ့အတူ တရုပျပွညျကို ကုနျးလမျးကနေ ပို့ခဲ့ပွီးပါပွီ ဟျောလနျနိုငျ ငံက တှဲဆှဲရယောဉျကုမ်ပဏီကလညျး ၃၀၆မီတာအရှညျ ရှိတဲ့ “ဗာရီယတျ” ကို တရုပျပွညျအထိ ဆှဲသှားဖို့ အသငျ့ဖွဈပါပွီ ဘာတှဖွေဈကွ ဦးမလညျး ကွညျ့ကွပါစို့။အိမျနဲ့အဝေးကွီးမှာကားပကျြလို့ပွနျဆှဲရတဲ့အဖွဈကို ကွုံဖူးကွပါသလား အခုအဖွဈက အဲ့ဒါထကျ အဆပေါငျးငါး ရာ ပိုခကျပါတယျ ဘာလို့လညျး လြောငျနငျး ဟာ တူရကီနိုငျငံ အီစတနျဘူလျ ကမျးခွကေပငျလယျပွငျမှာ ရကျပေါငျးငါးရာဝနျးကငျြ လောကျ တှဲဆှဲသင်ျဘောနဲ့အတူ တားမွဈခံထားရလို့ပါပဲ တူရကီအစိုးရက ဘော့စပရပျရလေကျကွားကို ဖွတျသနျးခှငျ့မပေးလို့ပါပဲ ။
အဲ့ဒီရလေကျကွားကိုဖွတျမှ မွထေဲပငျလယျကိုရောကျမှာပါ တူရကီပို့ဆောငျရေးဝနျကွီးက တားမွဈတာပါပဲ။သူပွောတာက ဒီလို ၃၀၆ မီတာအရှညျရှိတဲ့ ကိုယျ့ဘာသာမမောငျးနိုငျပဲ ဆှဲလာရတဲ့ သင်ျဘောတဈစီးဟာ ဆှဲလာရငျး ကံမကောငျးအကွောငျးမလှလို့ တခုခုဖွဈခဲ့ရငျ ရလေကျကွားဟာပိတျသှားနိုငျတယျ ရလေကျကွားဟာ အကဉျြးဆုံးနရောမှာ မီတာရဝဝ ပဲအကယျြရှိတာမို့ ရလေမျးပိတျသှားရငျ ဒီရေ လကျကွားကိုအသုံးပွုနကွေရတဲ့ရယောဉျအသှားအလာတှေ ပိတျကုနျမယျ အီစတနျဘူလျမွို့မှာ အခကျအခဲတှရှေိလာလိမျ့မယျဆိုပွီး တားမွဈခဲ့တာပါ။အရငျအခြိနျတှတေုနျးကလညျးသာဓကအဖွဈအပကျြတှေ ရှိခဲ့ဖူးပါတယျပေါ့ ။
အဲ့ဒိ မတိုငျခငျတနှဈက က ယူဂိုစလားဗီးယားမှာ နတေိုးတပျဖှဲ့တှရေဲ့ လကွေောငျးတိုကျခိုကျမှုကို တရုပျကကနျ့ကှကျခဲ့ဖူးပါတယျ တူရကီ က နတေိုးအဖှဲ့ဝငျအဖွဈပါခဲ့တယျ ဒါကို ပွနျလကျစားခတြေယျလို့ တရုပျကထငျလာ တယျ လြောငျနငျးဟာ တူရကီမှာ ၁၆ လတိတိ တှဲဆှဲခ တဈနကေို့ ဒျေါလာ၈၅၀၀ ပေးနရေရငျးနဲ့ ပိတျမိနခေဲ့ပါတယျအဆုံးမှာတော့ ဘဂေငျြးအစိုးရဟာ တူရကီကို တိုးရဈခရီးသှားလာရေး အထူး အခှငျ့အရေးတှပေေးပွီး ဖွတျသနျးခှငျ့ကိုလဲလှယျခဲ့ရပါတယျ ၂၀၀၁ သွဂုတျလကိုရောကျလာပါပွီ နောကျဆုံးတကာ့နောကျဆုံးမှာတော့ ၂၀၀၁ နိုဝငျဘာလအရောကျမှာ တှဲရယောဉျပေါငျး တဈဒါဇငျကြျော အရေးပျေါကယျဆယျရေး ရယောဉျမြားစှာတို့နဲ့အတူ။
လြောငျနငျးဟာ ဘော့စပရပျရေ လကျကွားကို ပွဿနာတဈစုံတဈရာမပျေါပေါကျဘဲ ဖွတျသနျးနိုငျခဲ့ပါတယျ ဒါဒနယျရလေကျကွားကိုပါဖွတျနိုငျခဲ့ပါပွီ အခကျအခဲဆုံးအပိုငျးကိုကြျောနိုငျခဲ့ပါပွီ။နောကျထပျ၂ရကျအကွာမှာ Skyro ကြှနျးအနားအရောကျ ပငျလယျပွငျမှာမုနျတိုငျးမိတော့ လတေိုငျနှုနျး ၆၀မိုငျလောကျမိပွီး တကျမတှမေတပျထားရသေးတဲ့လြောငျနငျးဟာ မုနျတိုငျးထဲမှာ တှဲဆှဲကွိုးပွတျပွီး မြောပါသှားခဲ့ပါသေးတယျ ပွနျလိုကျဆှဲရတာနှဈရကျလောကျကွာခဲ့ပွီး တှဲဆှဲရယောဉျနဲ့ ကွိုးပွနျဆကျဖို့ကွိုးစားရငျး ပျေါတူဂီသင်ျဘောသားတဈယောကျ ရထေဲကသြဆေုံးခဲ့ရတာလညျးရှိခဲ့ပါသေးတယျ
ကိုယျ့ဘာသာမောငျးနိုငျတဲ့ သင်ျဘောတှဟော ဆူးအကျတူးမွောငျးကို ဖွတျပွီး အိန်ဒိယသမုဒ်ဒရာကနေ တရုပျပွညျကို ဖွတျဝငျနိုငျပါတယျ လမျးတိုပါတယျ ဒါပမေယျ့တူးမွောငျးဟာ စကျမဲ့ရယောဉျတှကေို ပေးမဖွတျပါဘူး ဒီတော့ လြောငျနငျးအလောငျးအလြာဟာ အာဖရိကကို တပါတျကွီးပါတျရပါတော့တယျ ဗတျစကိုဒဂါးမားရဲ့ လမျးကွောငျးအတိုငျးပေါ့ တခြုပျခြုပျတခပျြခပျြနဲ့ ကွှကွှရှရှတဖွညျးဖွညျးလေးနဲ့ ပေါ့ တဈနာရီကို ၇မိုငျနှုနျးလောကျနဲ့ပါ ပဲ။၂၀၀၂ မတျလမှာတော့ လြောငျနငျးဟာ လြောငျနငျးပွညျနယျ ဒါ့လိယနျ မွို့က ဆိပျကမျး ကို ဆိုကျ ရောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ ပွညျနယျရဲ့နာမညျကိုအစှဲပွုပွီး သူ့ကို ဒီနာမညျပေးခဲ့တာပါပဲ ။
သုံးနှဈအကွာမှာ အကွီးစားပွငျဆငျတပျဆငျရေး အတှကျလှနျးတငျခဲ့ပါတယျ သံခြေးတှကေိုသဲနဲ့မှုတျပွီးခြှတျခတြာတှေ အငျဂငျြတှပွေနျ တပျပွီး အထိုငျခတြာတှလေုပျခဲ့ကွပါတယျ။တရုပျရတေပျဟာ သင်ျဘောကို လယောဉျတငျသင်ျဘောအဖွဈနဲ့ပဲ သုံးခငျြတာပါ ရုရှတှဆေောကျ ထားသလို ခရူဆာကယျရီယာအဖွဈနဲ့ ဖါးတဈပိုငျးငါးတဈပိုငျး မလိုခငျြပါဘူး ဒီတော့ သင်ျဘောဖကျြမဈဆိုငျးတှနေရောမှာ လကွေောငျးရနျ ကာကှယျရေးဒုံးကညျြစနဈရယျ အနီးကပျ လကွေောငျးရနျကာကှယျရေးစနဈတှရေယျနဲ့ ပွောငျးလဲတပျဆငျခဲ့ပါတယျ။ သင်ျဘောရဲ့အခွခေံ တိုကျခိုကျရေး လကျနကျစနဈ ကိုပွောရရငျ J15 တိုကျလယောဉျ၂၄စီးဟာ ရုရှတို့ရဲ့ SU33 ကိုကျောပီလုပျထားတာပါပဲ။
ယူကရိနျးဆီကနေ ရလာခဲ့တာပါ လြောငျနငျးဟာ ရဟတျယာဉျတှကေိုလညျးတငျဆောငျနိုငျပါတယျ လကွေောငျးရနျကာကှယျရေး ရဟတျ ယာဉျ တှနေဲ့ ကယျဆယျရေး ရဟတျယာဉျ စုစုပေါငျးလေးစငျး တငျဆောငျနိုငျပါတယျ။၂၀၁၂ စကျတငျဘာလ ၂၅ရကျနမှေ့ာ လြောငျနငျးကို တပျတျောဝငျ ပွုလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ J15 တိုကျလယောဉျတှေ ဆငျးသကျတာ တှကေတော့ နောကျ တဈလအကွာမှာ စတငျပွုလုပျနိုငျခဲ့ပါ တယျ လြောငျနငျးကို ပုံတူကူးခထြားတဲ့ တရုပျပွညျတှငျးဖွဈ လယောဉျတငျသင်ျဘောနောကျတဈစီးကတော့ ဒီနှဈထဲမှာ ပငျလယျပွငျကို ထှကျလာဖို့ရှိနပေါပွီ ကားတှနေဲ့ သယျလာခဲ့ကွတဲ့ ဘလူးပရငျ့တှနေဲ့ drawings ပုံစံတှရေဲ့ အကြိုးကြေးဇူးပေါ့။
Xu ရဲ့အပွောအရ ပေါ့ ဗာရီယတျ က တရုပျတို့ကို သုတသေနနဲ့ တီထှငျမှုမှာ ၁၅ နှဈလောကျ အခြိနျကုနျသကျသာအောငျ လုပျပေးနိုငျခဲ့ တယျလို့ ဆိုပါတယျ “ဆူ” ကို တရုပျပွညျကွီးက အရမျးခြီးမွှငျ့မယျလို့မထငျကွဘူးလား ? “ဆူ” ဟာဟောငျကောငျက အိမျလညျးရောငျး ခဲ့ရတယျ စုစုပေါငျး သနျး၁၂၀ လောကျကုနျကခြဲ့ပွီး အဆငျမပွမှေုတှကေို ညှိနှိုငျးဆောငျရှကျ နရေတဲ့ ကာလအတှငျးမှာ အကွှေးတှကေို လှိမျ့ဆပျနခေဲ့ရပါတယျ။ဖွဈခငျြတော့ လုပျငနျးအကွံအစညျကွီးကို စခဲ့တဲ့ ဗိုလျခြုပျကွီး ဂြီဟာ အဂတိလိုကျစားမှု မှောငျခိုမှုတှေ နဲ့ ၂၀၀၁ မှာ ထောငျခခြံခဲ့ရတာကွောငျ့ အကွံအစညျကွီးမှာပါခဲ့ကွတဲ့ အရာရှိ တှကေ”ဆူ” ကို လာမတှကွေ့တော့သလို။
သူတကယျအကုနျအကခြံထားရပါတယျဆိုတာကို ထောကျခံပေးဖို့လညျးမလုပျကွတော့ပါဘူး ။အစိုးရအနနေဲ့တော့ “ဆူ”ကိုဒျေါလာသနျး ၂၀ ပွနျပေးခဲ့ပါတယျ သင်ျဘောဝယျယူခအဖွဈပေါ့ ဒီလောကျနဲ့မလောကျပါဘူး ဒိထကျအမြားကွီးကုနျကထြားရပါတယျဆိုပမေယျ့ ပိုကျဆ နျပွနျမရပါဘူး ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ “Xu” အနနေဲ့ ဘောကျခြာ(ပွစော) တှေ လကျထဲမှာ မရှိတော့လို့ပါပဲတဲ့ တကယျတမျးပွောရရငျ ယူကရိနျးမှာပေးခဲ့ရတဲ့ လာဘျငှတှေဟော ပွစောမရှိနိုငျပါဘူး တခြို့သော ကိစ်စတှမှောလညျး ပွစောဆိုတာတှဟောမရနိုငျပါဘူး သငျခနျး စာအနနေဲ့တော့ပွောရမယျ ဆိုရငျတော့ ဘောကျခြာပွမှ ပိုကျဆနျရပါမယျ လို့သာမှတျပါ ။
ဗာရီယတျ သင်ျဘောကွီးဝယျတာနဲ့ပတျသကျပွီး မှတျသားသငျ့တာတဈခုကိုဖျောထုတျပွရမယျဆိုရငျ ” သငျပေးလိုကျတဲ့ စတေနာတှအေ တှကျ သိတျပွီးပွနျမမြှျောလငျ့ပါနဲ့ ပွီးတော့ ဘောကျခြာတှကေိုသိမျးထားပါ” လို့ပါပဲ။